हृदघातको हल्लापछि लाइभमा आए पारस शाह : के हर्टअट्याक हुने मान्छे हो म ? भएपनि फेरि उठ्छु – जुगल टाईम्स
Posted on २२ बैशाख २०७७, सोमबार १७:४३ Author जुगल टाईम्स	Comment(0)
पूर्वयुवराज पारस शाहले आफू स्वस्थ रहेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । सोमबार उनलाई हृदयघात रहेको हल्ला फैलिएपछि आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुकमार्फत लाइभमा आएका पारस शाहले भने, ‘मलाई केही भएको छैन है साथीहरु, मलाई हृदयघात भयो रे भन्नेखालका हल्ला सुनेँ, के हर्टअट्याक हुने मान्छे हो म ? भएपनि फेरि उठ्छु !’
बिन्दास मुडमा लाइभमा आएका पारसले आफ्नो ’boutमा अफबाह फैलाइएको भन्दै असन्तुष्टि समेत पोखे । उनले भने, ‘हेल्लो क–कसले हेरिराखेको छ ? ओके गाइज हार्टअट्याक नोथिङ । भर्खर उठेँ ।’
उनले आफ्नो नाम गलत नियतका साथ लेखेर कसैले खान पाउँछ भने आफ्नो भन्नु केही नरहेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
लाइभका क्रममा उनैसँगै रहेका र आवाज सुनिएका केही युवायुवतीले स्वस्थ मान्छे’bout अफबाह फैलाइएको र रमाइलो मुड चलिरहँदा अनावश्यक भ्रम फैलाइएको बताएका छन् । पारस यतिबेला पोखरामा रहेको उनका निकटस्थहरुले बताएका छन् ।
कोरोना अपडेटः हालसम्मका मुख्य खबर
Posted on ९ बैशाख २०७७, मंगलवार ०९:०५ Author प्रदेश न 1
इटलीमा पहिलो पटक एक दिनमा नयाँ संक्रमितको संख्यामा कमी आएको छ । इटलीका लागि यो राहतको कुरा हो । यसैबीच युरोपका विभिन्न देशले लकडाउन थोरै खुकुलो पारेका छ । – अमेरिकामा कच्चा तेलको मूल्य पहिलो पटक जिरोभन्दा पनि मुनी गएर माइनसमा पुगेका छ । तेल उत्पादकले आफ्ना खरिदकर्तालाई पैसा दिएर तेल लिन आग्रह गरिरहेको बताइएको […]
कोरोनाभाइरसको संक्रमणपछि ठिक हुन कति समय लाग्छ ?
Posted on ७ बैशाख २०७७, आईतवार ११:३३ Author जुगल टाईम्स
कोभिड–१९ को महामारी सन् २०१९ को अन्त्यमा सुरु भएको भएपनि केही बिरामीलाई पूर्ण रुपमा ठिक हुन लामो समय लाग्ने कुराको संकेत पाइएको छ । सुरुमा तपाईंमा कतिसम्मको संक्रमण देखिएको थियो, यो कुरामा तपाईं कति चाँडो निको हुने भन्ने कुराको निर्भर हुन्छ । कोही व्यक्ति छिट्टै संक्रमणबाट उम्कने पनि हुनसक्छन् भने कतिले यसबाट पार पाउन लामो […]